Bangood: VOYO I8 Max kiniin Android ah oo qiimo dhimis leh | Androidsis
Eder Ferreño | | Aaladaha Android, Kiniiniyada Android
Suuqa kaniiniga waligiis ma dhamaynin inuu kaco, in kastoo aan ka helno tiro ka mid ah moodooyinka ugu xiisaha badan. Sidaas, haddii aad ku fikirayso inaad iibsato kiniin, maqaalkani xaqiiqdii aad buu kuu xiisayn doonaa. Sida waxaan soo bandhigeynaa VOYO I8 Max. Waa kiniin aad u dhammeystiran oo Android ah, oo leh shaashad 10.1-inji ah haatanna qiimo-dhimis lagu sameeyay Banggood.
Banggood waa mid ka mid ah dukaamada ugu caansan maanta. Gaar ahaan caan ku ah iibsashada alaabooyinka Aasiya. Hada, waxay noo keeneen VOYO I8 Max, kiniin qiimo jaban.
Waxaan wajaheynaa 2 1 ee ugu dhameystiran uguna macquulsan. Tan iyo markii aan u isticmaali karno inaan ku cunno waxyaabaha ku jira warbaahinta badan. Marka waxaan arki karnaa taxanaha ama filimada aan jecel nahay. Laakiin mahadsanid kumbuyuutarka kumbuyuutarka ee ay ku jirto, waxaan sidoo kale shaqeyn karnaa ama qaban karnaa hawlo sida tafatirka sawirada ama fiidiyowyada Tan iyo waa inaan iftiimino 10,1 shaashad inji ah VOYO I8 Max.
Si aan kuu siino fikrad dhammaystiran, waxaan kuu daynaynaa qeexitaannada dhammaystiran ee kaniinkan:
Faahfaahinta farsamada VOYO I8 MAX
Tusaale I8 MAX
Nidaamka hawlgalka 7.1 Android OS
Screen 10.1 inches
Gacaliye Helio X20 Deca-core
Kaydinta gudaha 64 GB
Kaamirada gadaal 12 MP
Kaameradda hore 3 MP
Xuduudaha kala duwan 2.5G + 5G 4G UV GPS Bluetooth 4.0
Tilmaamo kale Qalabka kumbuyuutarka ee kumbuyuutarka Bluetooth
Batariga 5.000 Mah
Cabbirada 246x 170 x9 mm
Peso Gram 580
Tani VOYO I8 Max waa kiniin ku habboon dhammaan noocyada xaaladaha. Maaddaama haddii ay tahay inaad shaqeyso waa wax aad u fudud, labadaba kumbuyuutarka iyo ereyga kiniinku leeyahay. Marka waad qori kartaa, tafatiri kartaa dukumiintiyada ama sawirada ama aad diyaarin kartaa bandhigyo. Marka wax kasta oo aad u baahan tahay inaad fuliso waxay suurtogal u noqon doontaa mahadsanid qaabkan. Maxaa intaa ka badan, batarikeeda 5.000 Mah waa in la iftiimiyaa. Marka waxay ku siin doontaa madax-bannaanid fara badan, sidaa darteed waad isticmaali kartaa maalinta oo dhan.
Banggood wuxuu noo keenayaa VOYO I8 Max qiima weyn oo ah 188,48 euro. Markaa shaki la'aan waa qiimo aad u weyn oo ah kiniin dhammaystiran oo noocyo badan leh oo aad u isticmaali karto dhammaan noocyada xaaladaha. Xiisaynaya kiniinka? Haddii aad rabto inaad waxbadan ka ogaato tusaalahan ama aad sii wadato iibsigiisa, waxaad ku sameyn kartaa waxyaabaha soo socda isku xirka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Kiniiniyada Android » VOYO I8 Max: Kiniin dhammaystiran oo 10-inji ah oo qiimo dhimis ah Banggood
LG V30S ThinQ, oo la cusbooneysiiyay V30 oo leh tan ugufiican AI oo lagu soo bandhigay Shirweynihii Dunida ee Mobaylada